आदित्य नारायणले लाइभ गीत गाउँदा यस्तो क्रेज (भिडियो सहित) »
काठमाडौँ असार, २३ । विगत लामो समय देखी नै भारतमा बस्दै आएका गायककार उदित नारायण झा का छोरा आदित्य नारायण झा अहिले नेपालको राजधानी काठमाडौँमा छन् । ‘आदित्य नारायण झा लाइभ इन नेपाल’ कार्यक्रमका लागी नेपाल आएका आदित्य गत शनिवार ठमेल स्थित क्लब फरेन्हाइटमा आफ्नो दमदार प्रस्तुति दिएका थिए । मध्यरातमा प्रस्तुतिको लागी स्टेजमा चढेका आदित्यले केही आफ्ना र केही ट्रेन्डिङमा रहेका हिन्दी गीतहरू प्रस्तुत गरे । आदित्यले आफ्ना बुवा उदित नारायण झा ले गाएका चर्चित गीत ‘कुसुमे रुमाल’ ‘यो गाउँको ठिटो म’ बोलको नेपाली गीत गाए ।
नेपाल आफ्नो घर हो र नेपाली जनता सबै आफ्ना हुन भन्दै नेपाल टेकेका आदित्यले ‘यसपटक सेड्युल अलि प्याक भएर घुम्न पाइन् , अर्को पटक छिटै आउँछु’ भने । सारेगमपा , एक्स फ्याक्टर र खतरा खतरा खतरा जस्ता शो होस्ट गरेर चर्चामा आएका आदित्यले नेपाली गीतसंगीतमा ‘कुसुमे रुमाल २’ मार्फत पार्श्व गायनमा डेब्यु गरेका हुन् । उनी बलिउडका गायक र कार्यक्रम होस्ट मात्रै नभई एक्टर समेत हुन् । क्लब फरेनहाइटको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा लाइभ प्रस्तुती दिदै उनले आफुलाई नेपालमा निमन्त्रना गरेकोमा धन्यवाद दिएका छन् । ‘आदित्य नारायण लाइभ इन नेपाल’ मा उनि दोस्रो पटक नेपाल आएका हुन् । उनि ८ वर्ष अगाडी पोखरामा आएका थिए ।
यो पनीः बलिउड किंग शाहरूखकी श्रीमती भएपनी यस्तो जीवन बिताउँदै छिन् पत्नी गौरी
काठमाडौँ । भारतीय चलचित्र क्षेत्रका निकै चर्चित अभिनेता शाहरूख खान लाई बलिउड किंग खानको रूपमा चिनिने गरिन्छ । शाहरूख कि श्रीमती गौरी खान बेला बेलामा मिडियामा छाएकी हुन्छिन् । पछिल्लो समय गौरीले आफ्नो श्रीमान् शाहरूख खानको सम्बन्धको बारेमा केही नयाँ खुलासा गरेकी छिन् । उक्त कुराले मिडियाहरूमा निकै चर्चा भइरहेको छ । गौरी एक किताब सार्वजनिक कार्यक्रममा पुगेको बेला उनले केही सञ्चारमाध्यमहरू सँग कुराकानी गर्दै शाहरूख एक असल पति र पिता भएको बताइन । उनले शाहरूखको श्रीमती हुनु आफ्नो लागी निकै सकारात्मक कुरा भएको समेत बताएकी थिइन् । तर, आफूले सधैं साधारण कामकाजी महिलाको जस्तै साधारण जिन्दगी बिताउँदै आएको बताइन् । उनले आफूले सधैं शाहरुख खानको कारण भएको सकारात्मक कुरामा मात्र ध्यान दिने गरेको बताइन् । हालसालै शाहरुख खानले सामाजिक सञ्जालबाट आफ्नी छोरी सुहानाको ग्रेजुएटको जानकारी दिएका थिए । उनले ट्वीटरमार्फत् स्कुलको पढाइ सकिए पनि जिन्दगीको पढाइ कहिल्यै पनि सकिनु नहुने र केही न केही सिक्दै अघि बढ्नु जरुरी रहेको बताएका छन् ।
यो पनी हेर्नुहोस्ः संसारकै सबैभन्दा धनी अभिनेता जान्नुहोस् यिनको बारेमा । एजेन्सी । संसारकै सबैभन्दा धनी अभिनेता यिनको तलब सुन्नुभयो भने चकित पर्नुहुन्छ ! संसार मा येस्ता अभिनेता छन् जसको तलब सुन्दा हामीलाई अचम्म लाग्छ ! यिनलाई द रक भनेर पनि चिनिन्छ तर यिनको नाम डवेन जोन सन् हो यदि तपाइले रेस्लिंग हेर्नुभएको छ भने यिनलाई सजिलै चिन्न सक्नुहुन्छ ! पहिलाका रेस्लर हुन् रेस्लिंग छोडेर हलियुड तिर लागेका रक यति फेमस भएकी उनको जति तलब कुनै अभिनेता को छैन संसार मा हालचालको सूचीअनुसार उनलाई संसार कै सबैभन्दा धनी अभिनेता भनेर पनि चिनिन्छ ! रेस्लिंग का किंग केही वर्ष देखि अभिनय मा रहेका छन् !
यो मामलामा उनलाई हलिउडका केही ठूला कालकारलाई पछि छोडेका छन् । जसमा ज्याकी च्यान, ब्रेड पिट समेत सामेल छन् । पैसाले पैसा तान्छ भनेझै ड्वेन आफ्नी पत्नीको सहयोगमा एक प्रोडक्शन कम्पनी समेत चलाउछन् । यो प्रोडक्शन हाउसले अहिलेसम्म केी सफल फिल्म र टिभी शो निर्माण गरेको छ । ड्वेन आफ्ना फ्यानहरुका लागी सँधै केही न केही नयाँ चिज लिएर आउँछन् । उनले फ्लोरिडामा करिब १० वटा घर किनेका छन् । यी सबै घर उनले १० बर्ष भित्र किनेका हुन् । फ्लोरिडामाएक आलिशान घर छ, जसको मूल्य ३७ करोड हो । दास्रो ५ बेडरुमवाला घरको मूल्य २३ करोड रुपैंया हो । २०१२ मा क्यालिफोर्नियामा पनि ६ वेडरुपमवाला घर ३३ करोडमा उनले किनेका छन् ।
उनको भर्जिनियामा एक फर्म हाउस समेत छ ।उनको शाही सवारी छ । उनको प्राइवेट विजनेश जेट गल्फस्ट्रिम जी ६५० छ । उनी परिवारका साथ यही जेटमा यात्रा गर्छन् । मार्केटमा यो जेटको मूल्य करिब ४३५ करोड रुपैंया छ । उनीसँग इटालियन कम्पनीको सुपर कार पागानी ह्युएरा पनि छ । उनी आफै कार चलाउन मन पराउँछन । यो कारको मूल्य ६.७ करोड हो । यस्तै लेम्बोर्गिनी, फेरारी जस्ता महंगा कार समेत उनीसँग छन् । उनी आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै खानामा (कड फिस) माछा खान्छन् ।यसको मूल्य १ लाख रुपैंया पर्ने बताइन्छ । आफ्नो फिटनेसका लागि उनी महिनामा लाखौं खर्च गर्छन् । उनलाई घडी एकदमै मनपर्छ । उनले संसारको सबैभन्दा महंगो घडी कम्पनी रोलेक्सको घडी लगाउने गर्छन् । जसको मूल्य लाखौं पर्छ ।
काठमाडौँ । चर्चित गायिका सिन्धु मल्लले यो वर्ष नयाँ तिजको गीत बजारमा ल्याएकी छिन् । लोक,...